Mitolona Hiarovana Ny Toerany Ara- Politika I Zuma Filohan’i Afrika Atsimo Taorian’ny Tatitra Fanaovan-Kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2016 14:35 GMT
Naneho hevitra tamim-pahatezerana ireo Afrikana Tatsimo, tamin'ny fahatafintohinanana, ary tamin'ny fihomehezana taorian'ny navoahan'ny mpiaro ny vahoaka teo aloha Thuli Madonsela ny tatitra “State of Capture”. Mampiseho ny tatitra fa namela fianakaviana Indiana manankarena iray hipetraka ao Afrika Atsimo antsoina hoe Guptas ,ny Filoha Jacob Zuma mba hampiasa volam-panjakana ho amin'ny tombontsoa manokana, sy mba hananana ambaindainy lehibe eo amin'ny fanapahan-kevitra manan-danjan'ny governemanta.
Niezaka nanakana ny famoahana ny tatitra i Zuma tany am-boalohany, nialoha ny nisintonany ny fitoriana taty aoriana.
Ny Biraon'ny Mpiaro ny Vahoaka dia andrim-panjakana ivelany [tsy miankina] izay manao fanadihadiana ny fihoaram-pefy rehetra hita amin'ny raharaham-panjakana sy amin'ny sehatra rehetran'ny governemanta ao Afrika Atsimo. Mahaleontena tanteraka ny sampan-draharaha ka tsy miankina amin'ny governemanta.
Tamin'ny taona 2014, namoaka tatitra mitondra ny lohateny hoe “Milamina anaty fiadanana” ny Mpiaro ny Vahoaka teo aloha Thuli Madonsela izay nahita fa nahazo tombontsoa tsy ara-drariny tamin'ny fanatsarana ny taniny i Zuma sy ny fianakaviany. Nahitana dobo filomanosana, valam-biby fiompy masina, fiompiana akoho , toerana fitsidihana, sy trano fanaovana fampisehoana ny fanatsarana ny fiarovana.
Tamin'ny taona 2016, nandidy ny filoha hamerina ny vola nampiasaina tamin'ny fanatsarana izay tsy misy ifandraisany tamin'ny resaka fiarovana, araka ny nofaritan'ny Departemantan'ny Vola, ny Fitsarana Araka Ny Lalàmpanorenana ao Afrika Atsimo, izay fitsarana ambony indrindra ao amin'ny firenena.
Mitady ireo porofo ao amin'ny #TatitraKolikolyAraPolitika #AsehoyNyTananaBrianMolefe
Rehefa avy namaky ny #TatitraKolikolyAraPolitika aho dia nanomboka nanontany tena raha toa ka niady ho an'ity firenena ity tany an-tsesitany tokoa araka ny lazainy ireo voromaherin'ny ANC
Namazivazy i Karabo Mokgoko raha niresaka an'i Jake Amo olo-malaza ao amin'ny media sosialy any Ghana hoe:
Hanampy ny Filoha hamolavola ny taratasy fametrahany fialany i Jake .#TatitraKolikolyAraPolitika pic.twitter.com/M3uv32299m
Nanoratra i Paul Claassen manoloana ny fanambaran'i Zuma fa tsy matahotra ny handeha ho any am-ponja izy :
@FUNDAmentalSKIL @BDliveSA TPT Tao an-tranomaizina i Zuma niaraka tamin'ny mpiadin'ny fahafahana tamin'ny farany teo – amin'ny manaraka izy hiaraka amin'ireo mpangalatra hafa
Nisioka i “Yonce” taorian'ny fanambaran'i Zuma voalohany ampahibemaso rehefa navoaka ny tatitra hoe:
Heveriko fa tsara ny fiomanan'ny Filoha Zuma ara-tsaina amin'ny fandaniany ny sisa androm-pahanterany any am-ponja 😢🙆🏾 https://t.co/M2vi3RkmEk
Tsy matahotra ny handeha any am-ponja aho, hoy Zuma @IOL. Mazava ho azy fa tsy matahotra ny fonja ny mpanao heloka bevava, ny jiolahim-boto ary ny mpisoloky … pic.twitter.com/xbHJfVKnZ1
Tsy miaro an'i Zuma aho, fa tsarovy ny #KolikolyAraPolitika tamin'ny taona 1652 nataon'ny Holandey sy tamin'ny taona 1806 nataon'ny Britanika?
Niantso ny tatitra ho “antontan-taratasy mikorontana” i Andile Mngxitama rehefa nanoratra tao amin'ny Black Opinion: